1.Difference dhexeeya qalab la Lugood iyo iCloud taageerto kor u
gurmad 2.Restoring Lugood iyo iCloud
xogta 3.Recovering ka Lugood isticmaalaya Dr. Fone u macruufka
4.Recovering xogta ka iCloud isticmaalaya Dr. Fone u macruufka
Iyada oo lacagta sii kordhaya ee xogta aan ku kaydiso ku telefoonada iyo kombuyuutarrada maalmahan, baahida loo qabo in la isku hallayn karo oo wanaagsan xal gurmad ayaa kor u kacay jeer kala duwan. Daraasado ayaa helay koboc this in qadarka xogta aan dhammeeyo oo dukaan in la sii kordhaysa heer ah qiyaastii 80% sannadkii, taas oo si fudud u weyn.
Sidaas, xogta ayaa dhab ahaan ka mid ah hantida aasaasiga ah ee nolosha ee ugu inaga mid ah iyo haddii aad tahay user macruufka ah nala mid ah, markaas hayaan Lugood iyo iCloud waa wax aad kaliya oo aan samayn karo aan. Waxaan isku dayi doonaa sida loo isticmaali hayaan Lugood iyo iCloud iyo sidoo kale aad u soo bandhigid si kale ugu wanaagsan ee la heli karo in aanu xaqiiq ah oo aad u.
1.Difference dhexeeya taageero aad qalab la Lugood iyo iCloud
Way adag tahay in kaliya soo qaado mid ka Lugood iyo iCloud ay taageerto kor u xogta aad si kastaba ha ahaatee, aan tijaabino iyo inay fahmaan waxa ay ku kala duwan yihiin weyn ee u dhexeeya labada hab oo gurmad macruufka.
1) fursado Kaydinta
Lugood dukaamada dhammaan faylasha gurmad on your computer, PC ama Mac.
iCloud , halka, kaydiya hayaan ee ku saabsan daruur.
2) Faylal ay taageereen u gurmad
Lugood taageertaa nooc oo waaweyn iyo in ka badan oo files u gurmad sida videos, music, sawiro (labadaba camera kitaabkii duudduubnaa ee maxalliga ah iyo kuwa ka baxsan waxaa ka mid ah), goobaha daaha guriga, taariikhda xiriir - baaqyo iyo fariimaha qoraalka ah iwm
iCloud dhinaca kale uusan raad raac ah oo wax walba oo aan sameeyo, tusaale ahaan, content kasta oo aad ka hesho meel ka baxsan ma Lugood ama App Store sida MP3 files ka CD ah, videos soo bixi iwm doonaa si aan la taageeray iCloud.
3) meel Kaydinta
Lugood kaydinta gebi ahaanba ku xiran tahay sida badan meel baad haysaan on your computer, si gebi ahaanba waxa ay bixisaa lacagta aan xad lahayn ee lagu kaydiyo.
iCloud bixiyaa ugu badnaan ilaa 1 TB ah meel lagu kaydiyo oo kaliya, kuwaas oo aad ka heli 5 GB ugu horeysay ee lacag la'aan ah.
4) Tilmaamo Safety
Lugood bixiya sirta si kastaba ha ahaatee ma aha doorasho ammaanka caadiga ah.
iCloud oo iyana waxay bixisaa sirta xogta by default, waxa ikhtiyaar ah ammaan ka dhigaan.
5) hababka kaabta
Lugood kuu ogolaanayaa inaad la abuuro hayaan on your computer oo halkan aad u baahan tahay in lagu xiro qalab aad jidh ahaan la isticmaalayo cable lagu siiyay waxaa la.
iCloud bixiyaa hab sahlan taageerto ilaa xogta aad sida karaankeeda gurmad qalab aad ka badan WiFi.
2.Restoring Lugood iyo gurmad iCloud
Option1: Isticmaalka Lugood
• Si aad u bilaabaan oo leh, aad u hesho nooca ugu dambeeya ee Lugood oo ku xidh on your computer.
• Next, xirmaan kombiyuutarka si aad qalab macruufka la isticmaalayo macluumaadka ama ku amraya cable.
• Burcad Lugood dooro qalab aad mar waxa ay u muuqataa on suuqa kala Lugood ah.
• Hadda, dooro ikhtiyaarka ah ee soo celin siin gudahood guddi kooban oo ku saabsan Lugood ah.
• Marka shaashadda soo socda ama suuqa kala booda, dhufatey badhanka 'celiya mar kale in ay Lugood bilaabi si toos ah u soo celinta qalab aad.
• Kadib markii geedi socodka ka mid ah qalabka soo celiyo waa ka badan oo la xirey kadibna qalabka, waa inaad heshaa shaashadda soo dhaweyn la 'slide in la dhiso' ee doorasho. Si fudud, raac tilmaamaha ah Kaaliyaha Setup si ay u isticmaalaan gurmad ah oo hore loo soo celiyo qalab aad gabi ahaanba.
Option2: Isticmaalka iCloud
Hel macruufka version ugu dambeeyay ka hor inta aanad bilaabin, ka dibna ku saabsan qalabka macruufka, u tag Settings> General> Software Update. Download oo ku xidh, haddii aad aragto version a cusub ee macruufka ee la heli karo.
Hadda, raadiyo gurmad ugu dambeeyay ee la heli karo - Waxaad ku samayn kartaa adigoo u socda Settings> iCloud> Kaydinta> Maamul Kaydinta ka dibna hoos hayaan in ay taariikhda iyo size of gurmad ugu dambeeyey xaqiijiyay.
Hel qalab aad qotomisay - Waayo, kanu, Settings helaan> General> celi dibna dooro ikhtiyaarka ah ee 'masixi content oo dhan iyo goobaha'. Intaa ka dib, marka in Kaaliyaha Setup ah, doortaan 'samaysay qalab' iyo 'Soo Celinta ka kaabta ah' ka dibna login iCloud ugu danbeyn.
Halkan mar kale dooro 'Dooro kaabta' doorasho ka dibna isticmaali file gurmad ku jira liiska laga heli karaa iCloud.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waa 1-dii iPhone, iPad, iPod iyo software aduunka ee soo kabashada xogta la taabto. Waxay bixisaa xal buuxa inuu ka soo kabsado xiriir la tirtiro, fariimaha qoraalka ah, sawiro, qoraalo, Deymaha maqan cod, Safari Bookmarks oo dheeraad ah oo ka iPhone, iPad iyo iPod taabto. Ka sokow soo kabsaday xogta si toos ah uga iPhone, iPad iyo iPod taabto, waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad ka bogsato xogta ka iCloud iyo Lugood gurmad files, idin siinayo 3 siyaabood oo aad ku heli files ka luntay ama la tirtiro. Waxaa si buuxda la jaan qaada ee macruufka dambeeyay 9, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPad Air 2 iyo in ka badan.
Wixii la xushay soo celinayo faylasha gurmad, waxaannu idin keenaynaa xalka ugu wanaagsan halkaas, Wondershare Dr.Fone ee macruufka, codsi ah in kabanayso xogta qalab aad oo aan gargaar ka Lugood ama iCloud. Halkaan guji laga yaabaa in download it on your computer ka dibna ku xidh. Halkan waxay leedahay Hanuuniye gaaban oo ku saabsan sida in ay sida ugu fiican u isticmaasho.
Burcad Wondershare Dr.Fone on your computer, ka dib markii aad u soo dejisan oo lagu rakibay on your computer ka dibna dooro ikhtiyaarka ah 'ka soo kabsado Lugood ee kaabta File ". Waa inaad awoodaa inaad ka aragto oo dhan gurmad Lugood diyaar u ah qalab iyo kuwa kale noqon. Dooro qalab aad iyo dhufatey button Start Scan.
Marka scan la dhammeeyo, waa inaad awoodid inaad ku eegaan faahfaahinta content oo dhan, oo loo qaybiyey qaybo kala duwan noqon. Waxaad hadda calaamadee karaan kuwa aad u baahan tahay soo kabsaday iyo doorto ikhtiyaarka ah 'Ladnaansho'.
Xogta 4.Recovering ka iCloud isticmaalaya Dr. Fone u macruufka
Dooro habka ah 'ka soo kabsado file kaabta iCloud' ka interface ugu weyn. Waa in aad awoodid in aad hadda gal isticmaalaya ID Apple aad shaashadda soo socda.
Marka qortey, waa in aad aragto liiska hayaan heli karaa suuqa kala / screen soo socda. Waa in aad hadda ka dooro mid ka mid ah oo aad jeclaan lahayd in la isticmaalo si loo bilaabo nidaamka dib u soo kabashada la beegsadeen 'Start Scan'.
Shaashadda xigta ha waa in aad doorato noocyo file doonayso inaad soo bixi lahaa oo ka soo dhacsaday. Fiiri kuwa aad u baahan tahay oo ku dhacay Next.
Marka iskaanka la dhammeeyo, waxaad si fudud u dooran kartaa faylasha aad u baahan tahay soo kabsaday iyo fiiri, ka furmo suuqa Kulanka Xiisaha Leh ee software-ka ah. Markaasuu ku dhufatey 'Ladnaansho' button si loo bilaabo nidaamka kaas oo u doonaynin inuu idin badbaadiyo oo dhan files, kuwaas oo ku saabsan in your computer.
Hadda oo aad wax ka ogaato ugu badan iyo sidoo kale hababka ugu fiican ee la isticmaalo iyo kabsaday xogta aad ka hayaan macruufka, kuwaas oo mid ka mid ah waxa aad jeceshahay in ay gurmad qalab macruufka: Ma Lugood ama iCloud, ha nala soo socodsii.
> Resource > Lugood > Wax walba oo aad rabto in aad doonayso inaad ogaato oo ku saabsan Lugood iyo hayaan iCloud